Gobol iyo degmooyinActuellement sélectionné
Baabuur, bas, tareen iyo diyaarad
Tjörn waa degmada-jasiiradeed, jasiirada lixaad ee Iswiidhan ugu weeyn, waxeeyna ku taala xeebta-galbeedka Iswiidhan. Tjörn waxeey lee dahay dabiicad weeyn, jawi urureed iyo dhaqamed oo xiiso leh, jawi shirkadeed oo kala duwan taasi oo markii la isku geyo keeneeyso in dadka dooranaayo in ku noolaadaan badanayaan ”Tjörn – jasiirada fursadaha”. Mashuraacyaal badan oo dhismo ayaa socdo, isgaarsiintana waxeey keeneeysaa in si sahlan lagu tago, loogana imaado Göteborg.
Degaanka caadiga ee jasiirada waa guriyaal-yaryar oo gaar ah laakin sido kale waxaa jiro guryiaal la kireysto iyo kuwo la iibsado.
Tjörns Bostad AB waa shirkada anfaca-guud ee guriyaasha iyo milkilaha guriyaasha ugu weeyn ee degmada Tjörn. Shirkada waxaa leh degmada. Waxeey lee dahay 550 guriyaal iyo sideetan-yamo goobo oo degmada meelaha badankood uga yaalo. Shirkada guriyaasha waxeey kala dalaashaa laga bilaaba guriyaasha la kireeysto ee caadiga ah ilaa guriyaasha safka isku tixan ee leh irid-gali oo gaar ah iyo balkoon.
Sido kale waxaa jiro dhowr guri-kireyaal oo madaxbanan. Kuwaas kuwa ee yihiin waxaad warbixin uga heli kartaa adiga adeegsanaayo xarunta-macmiilka Tjörn.
Warbixin dheeraad oo ku saabsan degida Tjörn, ka akhriso bogga degmada.
Sido kale waxaa jiro dad meesha degan oo luuqadaha waqooyiga-yurub uu tahay luuqada koobad, luuqadaha kale ee looga hadllo waa af isbaanish, af dari, af soomaali, af tigrinya, af carabi iyo afka albaaniya.
Tjörn waxeey lee dahay jawi urureed oo badan oona sii fiican uu shaqeeynayo ayadoo leh dhowr ururo oo badan lehna jiheeyn kala duwan. Diwaanka-urureed ee ku jiro bogga degmada waxaad si gaar ah uga raadsan kartaa ururo ka hoowl galo xisahaada.
Tjörn waa degmad hadafkeedu yahay in jasiirada dhan ee ka sii dhigto mid noo. Taasi mecnaheed waxeey tahay in ee san jirin bartame weeyn ee laakin jiraan bulshooyin-yaryar, xaafadaha weeyn waa Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Höviksnäs och Myggenäs.
Skärhamn oo ah xaafada ugu weeyn Tjörn, waxaa ku yaalo bartamaha guriga degmada oo leh xafiiska adeega-macmiilka Tjörn. Halkaas ayaa laga heli karaa caawinaad kala duwan iyo in meel sax laga helo hoowlaha degmada. Sido kale halkaan waxaa ku taalo maktabada-weeyn iyo xafiiska arimaha dalxiiska. Skärhamn waxaa ku yaalo iskuul, bankiyaal, dukaamo, rug caafimaad, farmashiye, hotelo, dhakhtar ilko, maqaayado, xarunta xilliga firaaqada iyo dhaqanka ee caruurta iyo dhalinyarada iyo mutxafka Nordiska akvarell. Ronnäng waxaa ku yaalo iskuul, dukaan cunto, hoteel, maqaayado iyo goob barafeed. Kållekärr waxaa ku yaalo dukaan cunto, dukaamo, rug caafimaad, farmashiye, maqaayado iyo xafiis bulshadeed. Myggenäs waxaa ku yaalo dukaan cunto, dukaamo, maqaayado, rug caafimaad iyo farmashiye. I Höviksnäs/Häggsvall waxaa ku yaalo xarun-dhaqaameed iyo xilli firaaqo, maktabad iyo iskuul.
Xafiiska shaqada iyo qasnada ceeymiska ugu dhaw waxeey ku yaaliin Stenungsund.
Xanaanada-caruurta ee degmada waxaa ku yaalo dugsiyaal xanaano, xanaanada maalmeedka ee qoyska iyo xanaanada caruurta iskulka (guriga-xilliga firaaqada). Warbixin dheeraad ah waxeey ku jirtaa bogga degmada.
Dugsiga heese dhexe iyo sare
Tjörn waxeey lee dahay dugsi hoose oo fiican oo ururka macaliimiinta galshay kaalinta lixaad e dalka, sidaas ayuu ku yahay midka ugu fiican Galbedka-Iswiidhan. Waxaa jiro sideed dugsiyaal-hoose halkaasi ee labo lee yihiin iskuulo leh fasalada dhexe.
Dugsiga sare ee ugu dhow waxuu ku yaalaa Stenungssund.
Barshadada iswiidhishka loogu tala galay ajnabiga waxaa lagu kala wadaa Stenungsund oo halkaas xataa ka jirto waxbarashada dadka waa weeyn. Barshada-iswiidhishka ee la badshay oo loogu tala galay dadka dalka cusub waxaa taasi la qabtaa ayadoo lala kaashanaayo degmooyin kale, waxaana lagu qabtaa Göteborg.
Tjörn waxaa ku yaalo dugsiga dadka waa weeyn ee Billströmska. Halkaas waxaa ka jiro koorsooyinkaan soo socdo; koorso guud (la socoto ama la socon doorashada heesaha, masawirka ama dhar-sameeynta), barnaamijka sayinka ee asaaska, barnaamijka heesaha iyo koorska-safka ee xuquuqda da’ yarta.
Gobolka Västra Götaland ayaa masu’ul ka ah daryeelka caafimaadka.
Tjörn waxaa ku taalo labo rug caafimaad ee gudaha Kållekärr, Skärhamn iyo Myggenäs. Meelahaan waxaa ku taalo oo kale ruggagta caafimaadka caruurta. Isbitaalka ugu dhaw waa isbitaalka Kungälvs.
Daryeelka ilkaha ee dad weeynaha waxuu ku yaala Skärhamn, sidoo kale kuwo madaxbanaan ayaa ka jiro jasiirada.
Xafiiska adeega bulshada ee degmada ayaa ka heli kartaa talobixin iyo tagero, wac Mottagningsgruppen telefoonka 0304-60 19 19 ama e-maylka: mottagningsgruppen@tjorn.se.
Anaga muhiim ayee noo tahay in markii aad degmada la xariireeyso hesho xanaanada iyo caawinaad si aad uu fahmi karto. Haddii ee kuugu adag tahay fahmida iyo ku hadalka iswiidhishka waxaad xaq uu lee dahay in aad hesho caawimaad oo aad ku adeegsaneeyso turjumaan. Haddii aad uu baahan tahay turjumaan markii aad nala kulmeeso, arintaan wargali xog-hayahaada ama markii aad balan sameeysaneeyso.
Isgaarsiinta Tjörn waxaa ku jiro basas iyo dooman. Dooman oo si joogta ah uu socdo ayaa tago jasiiradaha sii yaryar sidii Dyrön, Åstol iyo Härön. Västtrafik ayaa ka masu’ul ah isgaarsiinta guud.
Jadwalka-socodka ee basaska iyo doomanka waxaad ka heleeysaa bogga Västtrafik.
Haddii aada hubin baska ama doonta ku geeyneeyso meesha aad dooneeyso waxaad wicid artaa adeega-macamiilka Västrafik, telefoonka 0771-41 43 00.
Tareen ka ma jiro Tjörn. Boosteejada-tareenka ugu dhow waxeey ku taala Stenungsund.
Goobaha.-duulimaadka ugu dhow waa guubta-duulimaadka Landvetter iyo Göteborg City Airport. Laba goob oo duulimaadeedba waxaa ka baxo basas tago Göteborg, kadibna la bas ku socdo Tjörn ayaa la soo qaadan karaa.
Ku dhawaad 1 000 qof ayaa ka shaqeeyso degmada Tjörn taasi oo keeneeyso in degmada ee tahay goobta shaqadeed ee ugu weeyn jasiirada.
Jawiga shirkadeed ee Tjörn waxuu ka kooban yahay shirkado yaryar iyo kuwo xoogaa weeyn. Waxaa Tjrön ka jiro in yar oo dhaafeeyso 1 900 oo shirkad oo ka howl galo laamanka badankooda, laakin qeeybta ugu weeyn waa ganasiga-badmaxnimada, hoowlaha la talinta, dalxiiska, ganacsiga, hoowlaha dhismaha iyo beeraha/beerista dhirta/kaluunka. Shirkadaha badankood waxeey lee yihiin in ka yar 10 shaqaale. Diiwaanka-shirkadaha ee degmada waxaa laga heli karaa shirkadaha badankood.
Shaqo dhiibayaasha kale ee ka weeyn Tjörn waa Wallhamn AB, Tarbit Shipping AB, Per Jacobsson Byggnads AB och Seniorbolaget i Sverige AB.
Shaqada degmada waxeey tahay in ee sameeyso shardiga-mustaqbaleed ee ugu fiican sii loo helo hormurid fiican oo laga sameeynaayo shirkadeeynta hada jirto iyo kuwo cusub. Shardi-mustaqbaleed oo lagu soo jiidan karo Tjörn shirkadleeyaal kale oo badan waa in jireen fursadaha fiican oo ku beegan degaan fiican, nolaal wanaagsan iyo masruufida shakhsiyeed. Waxaa jiro adeeg-macmiil oo sii fiican uu dhisan oo wada shaqeeynayaan iskuulada, hoowlaha dugsiyada xanaanada iyo xanaada bulshada oo fiican. Soo bandhiga weeyn ee howlaha xilliga firaaqada iyo dhaqanka oo keeneeyso tayo-nololeed oo sareeyso. Uu dhawanaanshaha Göteborg iyo dabiicada quruxdeeda waxeey Tjörn ka dhigeeysa meel soo jiidashoo uu leh in la dago.
Bogga degmada ayee ku jirtaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan shaqo iyo shirkad.
Halkaan waxad ka arkaysa shaqada ka banaan iminka degmada iyo nawaaxigeeda.
Qor hal eray si aad ugu doorato liiska
Sommarassistent på tjörn Personlig assistent
Personliga assistenter sökes på Tjörn Personlig assistent
Personlig assistent sökes på 60 % till kvinna på Tjörn Personlig assistent
Vi söker nya medarbetare i Tjörn Account manager
Två Kulturtolkar Integrationshandläggare
Kock med restaurangutvecklingsuppdrag Kock, storhushåll
Projektingenjör VA Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad
Fysioterapeut / Sjukgymnast Fysioterapeut/Sjukgymnast
Lärare / specialpedagog åk 6 - 9 Specialpedagog
Elevassistent till Häggvallskolan åk 6 - 9 Elevassistent
Lärare i musik till Bleketskolan 7 - 9 Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Personlig assistent sökes till man i Kållekärr! Personlig assistent
Lärare i förskoleklass till Kållekärrs skola Lärare i förskoleklass
Ekonomiassistent sökes Ekonomiassistent
Trafikingenjör Civilingenjör, lantmäteri
Miljö - och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lärare / Speciallärare med språkinriktning Speciallärare
Förskolevikarie sökes för flexibelt extrajobb inför hösten Lärare i förskola/Förskollärare
Bogga 1 ee ka mid ah 267
Khariidada adeegga bulshada
Waxaa khariidada ka arki kartaa shaqooyinka guud ee degmada. Waxaad isticmaali kartaa meel khariidada kamid ah oo aad ku qori kartid ereyga waxa aad raadineysid, sida ciwaanka guriga aad raadineysid.
Waxaad uu baahan tahay in aad JavasScript ka hoowlgalisid boog-akhriyahaada si aad uu isticmaasho qabadkaan.
Dooro waxii aad rabtid ineey khariidada ku tusto
Waxaa jri kara shaqooyin badan
Ogeeysiisyada shaqada qaarkood kuma qorna ciwaanka meesha shaqada mana laga arki karo khariidada, laakin waxaad ka heli kartaa bogga ”shaqooyinka bannaan”.
Göteborg 35 minuter
Uddevalla 30 minuter​
Khariidad ka sii weeyn muuji
Akhriso warbiin ku saabsan gobolka
Dooro degmo kale